Ajụjụ - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Q1: Achọrọ m ka m mezuo ọrụ?
-> you nọ n'èzí China ma na-esite n'aka China?
> Chọrọ nkwado nkwukọrịta na ndị nrụpụta China?
-> you na-enwe nkụda mmụọ na ụlọ nkwakọba ihe na ngwa ngwa?
-> you na-achọ ọnụ ọrụ?
-> wantchọrọ itolite olu site na 10 ruo 10,000 kwa ọnwa?
Ọ bụrụ ee, ọ bụrụ na emezue Sunsonexpress bụ azịza amamihe dịịrị gị.
Q2: GHENN IS B THE N'IGHTB RRIGHT TOB TOR TO UBURU IWU?
N'agbanyeghị ụlọ ọrụ mmalite ma ọ bụ ụlọ ọrụ tozuru etozu, ọ bụrụ na ịchọtala na iwe gị na-arụ n'ụlọ nkwakọba ihe, ụgwọ ụlọ nkwakọba ihe (gụnyere ụgwọ ọrụ yana mgbazinye), ọkachasị mgbe ndị ọrụ gị na-arụsi ọrụ ike maka otu ụbọchị mana enwere ike ịlaghachi iwu, na mgbakwunye na ị nweghị oge itinye uche na azụmaahịa gị na-ere, mgbe ahụ ọ bụ oge iji ghọta na ị nwere ike ịchụpụ mmezu iwu gị ma leba anya na ihe kacha mkpa - azụmaahịa. Sourchụpụ mmezu nke iwu bụ mkpebi dị oke mkpa nke nwere ezi uche maka uto azụmaahịa. Mgbe obula olu olu gi kariri ihe ighara ijikwa, biko kpọtụrụ Sunsonexpress Mmezu na-atụ anya ma tụlee otu anyi nwere ike isi nyere gị aka itolite azụmaahịa na aha gị. Anyị nwere ahụmịhe bara ụba na ire ere e-commerce na oke oke na ngwa ahịa nke nwere ike inyere azụmahịa gị aka na ọkwa ọzọ.
Q3: Kedu otu esi ahọrọ ụlọ ọrụ mmezu kwesịrị ekwesị?
Mgbe ị na-achọ ịchọta ọrụ mmezu gị, ị ga-atụle ihe ndị a:
Nhazi ọnụahịa: Tụlee ụdị ihe (akụkụ, ibu, ụdị ngwaahịa wdg) ị na-ere yana ihe mmezu mmefu gị ka ị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ dabere na nha na ịdị arọ nke ihe ndị a na-ebufe. Ọ dịkwa mkpa ka ị mara ihe akwụ ụgwọ maka ịchekwa ngwa ahịa na ịtụtụkọ na ịkwakọba ihe gị. Ego ọ bụla zoro ezo na nkwekọrịta ogologo oge wdg.
Nhọrọ Mbupu: Ọ bụrụ n ’ị na-ere mba ofesi, ị kwesịrị ijide n’aka ma ụlọ ọrụ mmezu ahụ nwere ike ibupu mba niile.
Ebe nkwakọba: Lelee ma etiti mmezu ahụ gosipụtara na mpaghara "aka nri" dịka ị ga-achọ ịnweta ngwongwo gị site na ụlọ ọrụ mmezu ma ọ bụ ka ndị nrụpụta zitere ya na ọnụ ahịa dị ọnụ ala. Ọ bụrụ na ebe ụlọ nkwakọba ihe dị nso ọdụ ụgbọ elu, nke ahụ bụ nnukwu uru ịhazi ndozi ọsọ ọsọ iji kwụsị ndị ahịa.
Nkwado Ndị Ahịa: Mgbe ihe na-ezighi ezi n'oge ịtụ, mmezu na nnyefe usoro, ị ga-achọ ịgwa mmadụ okwu ma nweta nkwado, nke a bụ ọrụ ndabere nke ekwesịrị inye. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ mmezu ahụ nwere ike ịnye ọrụ ahịa ahịa mgbe ịkwụsị ahịa (dịka. Iwu nyocha) na nnọchite gị, nke ahụ bụ uru dị mkpa maka ị nweta ọrụ enweghị nsogbu.
Mmekọrịta: Ebe ọ bụ na ị na-eji ndị na-eweta ndị ọzọ nke 3rd, lelee ma ọ bụrụ na sistemụ ha agbakọrịrị ma ọ bụ na-etinye ya na sistemụ gị dị ka ụlọ ahịa weebụ gị, ahịa dị ka Amazon, ERP, ma ọ bụ nyiwe ọ bụla ọzọ. Ọzọkwa ọ kwesịrị ịdị mma ma ọ bụrụ na ọ na-enye ohere ịnweta ọhụụ zuru ezu na nyocha nlekota na mmezu usoro n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Ihe niile dị n'elu bụ akụkụ nke ọrụ Sunsonexpress mezuru.
Q4: Enwere m ike ịnweta ozi akaụntụ m na-ata oge na WEB?
Eeh. Sunsonexpress sistemụ na-enye ndị ọrụ niile ohere 24/7 ezigbo oge yana yana njikwa zuru oke na nchịkọta na njikwa usoro.
Q5: Kedu ụdị ọrụ ị nwere ike ịnye?
Anyị na-enye ọrụ dịgasị iche iche anyị kwenyere na anyị nwere ike igboju mkpa gị dị iche iche na ntinye.
1.Wụzu Mmezu nke ulflọ Ọrụ gụnyere ịnweta, nchekwa, bulie & mkpọ.
Ọrụ nnweta zuru ụwa ọnụ site na China site na ọrụ nzipu ozi, isi mba Express ọrụ, anyị onwe anyị mebere raara onwe ya nye akara, FBA mbupu ahịrị, Ibufe ebugharị ọrụ, shippinggbọ njem ụgbọelu, ọrụ ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na-ebugharị ụgbọ mmiri.
Enyemaka 3.Drop-ship gụnyere repacking, nkwado, ịkọ aha, mgbakọ, wdg.
Ọrụ mgbakwunye: kitting, branding, webstore mwekota.
5.Prose sourcing na ịzụ.
6.Payment gị n'ụlọnga gị ibu.
Q6: Nchekwa ụlọ nkwakọba ihe anyị ọ dị nchebe? Anyị na-enye mkpuchi na ngwaahịa dị n'ụlọ nkwakọba ihe anyị?
Ebe anyị nwere ọtụtụ ngwongwo anyị na-elekọta ma ọ bụ na-elekọta, anyị agaghị enwe ike ịkwafu ha.
Lọ nkwakọba ihe anyị nwere usoro mgbochi ọkụ yana nyocha 24 na njikwa na-achịkwa iji hụ nchekwa nke ngwaahịa gị. Ndị ọrụ nkwakọba ihe anyị nwere ahụmahụ etinyegoro usoro nkwakọ ngwaahịa edozi iji gbochie ihe ga-efu ma ọ bụ mebie n'oge usoro njikwa. N'ime ihe omume furu efu ma ọ bụ nke mebiri emebi, a na-enyocha ngwaahịa gị mgbe niile ruo uru ngwaahịa a. Ego mkpuchi bụ 0.1% nke "Uru Ngwaahịa" (ọnụahịa efu) nke ngwaahịa gị kwa afọ.
Q7 ： you nwere ike ịnabata mbupu nke ngwa ngwa ngwa ngwa?
Ee, anyị nwere ike ịnabata mbupu batrị, mmiri mmiri, ihe ịchọ mma, ntụ ntụ, wdg.
Q8 ： Kedụ ka m ga-esi akwụ ụgwọ mbupu ma ọ bụ ụgwọ ọrụ ndị ọzọ? Ekwesịrị m ịkwụ ụgwọ ndị a?
Eeh, ikwesiri ịkwụ ụgwọ ụgwọ ndị a. Can nwere ike ịkwụ ụgwọ anyị site na nnyefe, nnyefe ụlọ akụ, nnyefe waya, kaadị akwụmụgwọ, PayPal wdg. Mgbe ị natara ụgwọ gị, akaụntụ gị na anyị ga-etinye otu ego ahụ. Mgbe ahụ, anyị ga-ewepu ego na akaụntụ gị na akpaghị aka mgbe ọ bụla anyị zitere gị ngwugwu ma ọ bụ nye gị ọrụ. Iji zere igbu oge na mbupu na ọrụ, ọ bụ ọrụ gị iji hụ na enwere ego zuru ezu na akaụntụ gị. Nwere ike ịbanye na sistemụ anyị iji lee nkọwa azụmahịa na njikwa nke akaụntụ gị.
Q9 ： you nwere ike inyere m aka ịzụta n'aka ndị na-ere China?
Anyị maara na ụfọdụ ndị na-ere ahịa China anaghị anabata ịkwụ ụgwọ mba ofesi. Sunsonexpress nwere ike ịnye ọrụ "nke onwe gị", nwere ike ịtụ ahịa ma kwụọ ụgwọ maka gị.
Anyị makwaara na ụfọdụ ndị China na-ere ahịa anaghị ebubata ngwa ahịa na mpụga China. Sunsonexpress nwere ike ịnye ọrụ ebugharị maka ihe onwe gị ịzụrụ na webụsaịtị ndị China. Biko kpọtụrụ anyị site na email: Andy@sunsonexpress.com
Q10 ： Ikpokọta otutu nchịkọta na-atụ dị ka otu ngwugwu?
Sunsonexpress na-enye ọrụ nkwado. Ọ bụrụ n ’ị na-azụta n’aka ndị na - eweta ngwa ahịa dị iche iche, Anyị nwere ike ichere ka ha niile rute wee buputa ha n’otu igbe.
Q11 ： Olee otú ịkwụ ụgwọ?
Anyị anaghị eziga akwụkwọ ọnụahịa wee chere maka ịkwụ ụgwọ gị. Anyị na-eji usoro akwugo ugwo. Nwere ike itinye ego na akaụntụ Sunsonexpress gị ma sistemụ anyị ga-ewepụ ụgwọ na akaụntụ gị na-akpaghị aka. Nwere ike ịchọpụta azụmahịa azụmaahịa niile mgbe ịbanye n 'ụlọ ọrụ Onye Ọrụ anyị. A ga-eji nguzo fọdụrụ na akaụntụ gị maka azụmahịa gị n'ọdịnihu. Ọ bụ ọrụ gị iji hụ na ego zuru ezu iji zere ọgba aghara nke ọrụ. Nwere ike bulie akaụntụ gị site na PayPal. Iji nyefee ugwo na ntukwasi obi,
Enwere ụzọ abụọ iji kwụọ ụgwọ / bulie akaụntụ gị elu:
Nyefee ego 1.Bank: Biko kwupụta NJ onye ọrụ Sunsonexpress gị mgbe ị na-ebufe ego site na nnyefe ego, ka anyị nwee ike ịchọpụta ịkwụ ụgwọ gị ma kwanye akaụntụ gị n'ụzọ kwekọrọ na ya.
2.Payunes Account ： Biko tinye ego ozugbo site na sistemụ anyị. Usoro anyị ga-akwụ ụgwọ akaụntụ gị na RMB maka ego ole natara. Biko rịba ama na ụgwọ ụgwọ ụgwọ PayPal mgbe ị na-enyefe anyị ụgwọ. Na mgbakwunye, anyị ga-ewepu ego mgbanwe ego 2.5% maka ego mba ofesi niile belụsọ HKD.
3.Payoneer. Biko tinye ego ozugbo site na sistemụ anyị.
1. Anyị ga-akwụ ụgwọ akaụntụ gị dabere na ihe anyị natara. Ohaneze, ọ ga-abụ ego ole izigara mwepu ego azụmahịa PayPal.
2. Ọ bụrụ na ị ziga na USD, mgbe ahụ anyị ga-atụgharị ya na RMB ma jiri akaụntụ gị.